Refin’ny indostria: tsara toerana i Madagasikara amin’ny 2025, raha … | NewsMada
Refin’ny indostria: tsara toerana i Madagasikara amin’ny 2025, raha …
Fahefatra izao ny atrikasa fampahafantarana ny refin’ny indostria eto Madagasikara, natao ny 19 marsa teo an-dRenivohitra. Nanatrika izany ny solontenan’ny Friedrich Ebert Stiftung (FES),ny filohan’ny Alliance pour l’industrialisation de Madagascar, sy ny minisitry ny Indostria, ny varotra ary ny asa tanana.
Laharam-pahamehana nofaritan’ny minisitera misahana ny indostria (Mica) amin’ity taona ity ny fampandrosoana ny indostria eto an-toerana, hanomezan-danja ny « Vita malagasy », hahavita hamatsy ny tsena eto an-toerana sy hampahaleo tena ny toekarena. « Na eo aza ny fiovan’ny toetr’andro, tsara toerana i Afrika amin’ny 2025, betsaka ny tanora. Tsara toerana toy izany koa i Madagasikara manana ny ilaina rehetra, manohana ny hisian’ny indostria iray isaky ny distrika iray, indrindra fa indostria ho an’ny fambolena », hoy ny minisitra, Rakotomalala Lantosoa.
Saingy, hanova zavatra betsaka, raha tsy hahitana fanafana haingana, ny valanaretina Coronavirus. Amin’izao fotoana izao aloha, saika mandalo fotoan-tsarotra avokoa ny sehatry ny toekarena rehetra maneran-tany. Taona maromaro vao tafarina indray izao fatiantoka izao. Noho izany, mety hiova ny vinavina navoaka amin’izao refy fahefatra izao.
Ohatra azo ambara voalohany ireo orinasa faritra afakaba mpanao lamba. Raha nambaran’ny EDBM (Economic development board of Madagascar) mahatratra hatrany amin’ny 600 tapitrisa dolara ny vokatra miondrana vitan’izy ireo. 150 000 ny mpiasa amin’ireo faritra afakaba ireo, na 30 % amin’ny sehatry ny indostria. Efa misy amin’ireo orinasa afakaba ireo mampiato ny mpiasa amin’ny ampahany amin’izao trangana Coronavirus izao.
Nanana ny tanjany ny indostria teto Madagasikara tany aloha fa ankehitriny, manana ny ilaina rehetra hiverenana amin’izany heriny izany. Izay ny hanakambanana ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina handrosoana. Tamin’ny taritra momba ny refy fahatelo, nahitana nanampy betsaka ny indostria eto an-toerana ny fanjakana malagasy teo amin’ny tontolon’ny fandraharahana. 71,43% amin’ireo indostria ny nahita izay tontolon’ny fandraharahana nihatsara izay.